Brazil: “Nihoarantsika Ny Harin-karena Faoben'i Royaume Uni. Dia ahoana?”	Voadika ny 02 Janoary 2012 12:32 GMT
Zarao: Lohateny vaventin'ireo mpampahalala vaovao niomerika rehetra tao Brezila nandritra ny herinandro faran'ny taona 2011 ny hoe : Nihoaran'i Brezila i Royaume Uni tamin'ny nahalasa azy ho ny firenena faha enina matanjaka indrindra ara-toekarena eran-tany. Ampahan'ny famoahan-dahatsoratra tamin'ny 26 Desambratao an'ny gazety The Guardian, ilay gazety dia nitatitra avy amin'ny vinavina nataon'ny Foibe ho an'ny Fikarohana ara-toekarena sy ara-pandraharahàna milaza fa hamàrana ny taona amin'ny maha-firenena fahaenina eran-tany manana ny harin-karena faobe (PIB) ambony indrindra azy ny firenena: $2,500 lavitrisa.
Araka ny ambaran'ny Cebr, ny laharan'ny toekarena matanjaka indrindra dia eo ambany fitarihan'i Etazonia, arahan'i Shina, Japana, Alemana, Frantsa, Brezila ary ny Royaume Uni. Araka ny ambaran'ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI), ny harin-karena faobe ao Brezila ny taona 2011 dia tafakatra tokony ho $2,518 lavitrisa eo ho eo, izay manamafy ny vinavina nataon'ny Cebr. Tamin'ny 2010, tany amin'ny laharana faha-7 i Brezila, miaraka amin'ny harin-karena faobe $2,090 lavitrisa. Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraPaula Góes
Paula	Misaotra anao nandika ny lahatsoratro avylavitra!
03 Janoary 2012, 12:45	Raha hamaly ity hevitra ity avylavitra Momba ny mpandray anjara »	Tsy misy fisaorana.
03 Janoary 2012, 15:29	Raha hamaly ity hevitra ity Aina	eto aho vao tonga saina fa tena mbola betsaka ny voam-bolana malagasy tsy fantatro … 08 Janoary 2012, 20:58	Raha hamaly ity hevitra ity Jentilisa Momba ny mpandray anjara »	Ny voambolana ara-toekarena aloha dia efa tsy mahazatra ny maro. Fa na izany na tsy izany dia efa nisy koa ny niteny hoe manana voambolana mihitsy i Avylavitra
09 Janoary 2012, 08:55	Raha hamaly ity hevitra ity Ajanony ihany
FampandrosoanaMediam-bahoakaToekarena sy Fandraharahàna